၂၀၂၂ ခုနှစ်မှာ အာဆင်နယ် အသင်း နဲ့ စာချုပ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးမယ့် ကစားသမား ငါးဦးက ဘယ်သူတွေလဲ ? - xyznews.co
၂၀၂၂ ခုနှစ်မှာ အာဆင်နယ် အသင်း နဲ့ စာချုပ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးမယ့် ကစားသမား ငါးဦးက ဘယ်သူတွေလဲ ?
အာဆင်နယ် အသင်း အနေနဲ့ စာချုပ် သက်တမ်း တစ်နှစ်အောက် ကျန်ရှိနေတဲ့ ကစားသမားတွေကို ဇန်နဝါရီ အပြောင်းအရွှေ့ကာလမှာ အပြီးသတ် ရောင်းချ နိုင်ခဲ့ခြင်း မရှိရင် နွေရာသီမှာ အလွတ် ပြောင်းရွှေ့ကြေး နဲ့ လက်လွှတ် ရဖို့ ရှိနေပါတယ် ။
လက်ရှိ အချိန်တွင် လာမယ့်နွေရာသီမှာ အာဆင်နယ် အသင်းနဲ့ စာချုပ် သက်တမ်း ကုန်ဆုံးမယ့် ကစားသမား ၅ ဦး အထိ ရှိနေပါတယ် ။ အာဆင်နယ် အသင်း အနေနဲ့ အဲ့ဒီ ၅ ဦးထဲက အနည်းဆုံး ၃ ဦးကိုတော့ သက်တမ်း မတိုးဘဲ လက်လွှတ် သွားဖို့ ရှိပါတယ် ။ သူတို့ကတော့
၁ ။ ကိုလာစီနက်
ကိုလာစီနက် ဟာ လာမယ့်နှစ်တွင် အာဆင်နယ် အသင်းမှာ ဆက်မရှိတော့ဖို့ များတဲ့ ကစားသမား တစ်ဦးပါ ။ အာဆင်နယ် အသင်းဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ နွေရာသီကတည်းက ကိုလာစီနက် ကို တူရကီ အသင်း တစ်သင်းထံ ရောင်းထုတ်ဖို့ ကြိုးပမ်း ခဲ့ပြီး သူ့ရဲ့လစာငွေ မြင့်မားမှုကြောင့် အပြောင်းအရွှေ့ အထမမြောက်ခဲ့တာပါ ။
အာဆင်နယ် နည်းပြ အာတီတာ ကတော့ ကိုလာစီနက် ကို ဒီရာသီ ပွဲအချို့မှာ ပွဲထွက် အသုံး ပြုခဲ့ပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် မနေ့က ကစားခဲ့တဲ့ နိုင်ငံပွဲမှာ ကိုလာစီနက် ဟာ ဒဏ်ရာ ရသွားတာကြောင့် ဇန်နဝါရီမှာ ရောင်းထုတ်ဖို့ရာ အာဆင်နယ် အသင်း အခက်တွေ့ လာနိုင်ပါတယ် ။
တန်ကြေး – ပေါင် ၅.၈၅ သန်း
၂ ။ အယ်နီနီ
အယ်နီနီ ဟာလည်း ကိုလာစီနက် လိုပဲ တူရကီ ကလပ် ဂါလာတာစာရေး အသင်းထံ ပြောင်းရွှေ့ဖို့ ကြိုးစား ခဲ့ပေမယ့် အာဆင်နယ် အသင်းဘက်က ငြင်းဆန် ပယ်ချ ခဲ့ပါတယ် ။ ဂါလာတာစာရေး ဟာ အယ်နီနီ ရဲ့ ပြောင်းရွှေ့ကြေး ကို ငါးနှစ်ကျော် အရစ်ပေးချေဖို့ ကမ်းလှမ်း ခဲ့တာကြောင့် ဖြစ်ပါတယ် ။
အယ်နီနီ ဟာလည်း အာဆင်နယ် အသင်း နဲ့ စာချုပ် သက်တမ်း တစ်နှစ်အောက်သာ ကျန်ရှိတော့သူ ဖြစ်ပါတယ် ။
တန်ကြေး – ပေါင် ၉ သန်း
အာဆင်နယ် အသင်းဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ နွေရာသီမှာ နကီးတီးယားကို ဗီအဲရာ ရဲ့ခရစ္စတယ်ပဲလေစ့် အသင်းထံ ရောင်းချဖို့ သဘောတူညီ ခဲ့ပါတယ် ။ ဒါပေမယ့်ပဲလေစ့် အသင်းဟာ အသက် ၂၂ နှစ် အရွယ် နကီးတီးယား နဲ့ လစာ ပမာဏာ သဘောတူညီမှု မရရှိ ခဲ့ပါဘူး ။
ဒါကြောင့် နကီးတီးယား ဟာ အာဆင်နယ် အသင်းမှာ ဆက်ရှိ နေခဲ့ပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် နကီးတီးယား ဟာ ဒီရာသီမှာ ပရီးမီးယားလိဂ်မှာ ပါဝင် ကစားခွင့် မရထားဘဲ ခါရာဘောင်း ဖလား ၂ ပွဲမှာ ၂ ဂိုး သွင်းယူ ပေးထားပါတယ် ။
တန်ကြေး – ၁၄.၄ သန်း
၄ ။ ချိန်ဘာ
ချိန်ဘာ ဟာလည်း လာမယ့် နွေရာသီမှာ အာဆင်နယ် အသင်း နဲ့ စာချုပ် သက်တမ်း ကုန်ဆုံးတော့မယ့်သူပါ ။ ဒါပေမယ့် စာချုပ်သစ် ချုပ်ဆိုဖို့ ဆွေးနွေး နေတယ် ဆိုတဲ့ သတင်းတော့ ကြားရခြင်း မရှိသေးပါဘူး ။
အာဆင်နယ် အသင်းဟာ အသက် ၁၉ နှစ် အရွယ် ချိန်ဘာ ကို ဆောက်သမ်တန် အသင်းကနေ ပေါင် ၁၈.၂ သန်း နဲ့ စွန့်စွန့်စားစား ခေါ်ယူ ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ် ။ ချိန်ဘာ တစ်ယောက် အာဆင်နယ် အသင်းမှာ ရှိနေတာ ၇ နှစ်ကြာ ရှိပြီ ဖြစ်ပြီး ပွဲပေါင်း ၁၂၀ ပါဝင် ကစားပေးထားပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် သူ့ရဲ့ အကောင်းဆုံး ခြေစွမ်းကို မြင်တွေ့ ခဲ့ရတာက ဖူလ်ဟမ် အသင်းမှာ အငှားထွက် ကစားစဉ်က ဖြစ်ပါတယ် ။
တန်ကြေး – ပေါင် ၁၀.၈ သန်း
၅ ။ လာကာဇက်
လာကာဇက် ဟာ အာဆင်နယ် အသင်း ရဲ့သမိုင်းတစ်လျှောက် စတုတ္တမြောက် ဈေးအကြီးဆုံး ကစားသမားပါ ။ လာကာဇက် ဟာ အပြောင်းအရွှေ့သတင်း မကြာခဏ ထွက်ပေါ်လေ့ ရှိသူ ဖြစ်ပြီး လာမယ့် နွေမှာ စာချုပ် သက်တမ်း ကုန်ဆုံးတော့မှာ ဖြစ်တာကြောင့် ထွက်ခွာဖို့ ရာခိုင်နှုန်း များနေပါတယ် ။
တန်ကြေး – ပေါင် ၂၅.၂ သန်း
၂၀၂၁ ခုနှစ်မှာ စာချုပ် သက်တမ်းကုန်မယ့် ကစားသမားများရဲ့ စုစုပေါင်း တန်ကြေး – ပေါင် ၆၅.၂ သန်း
Previous Article နိုင်သူစား ၊ မှားသူခံ . . . ကမ္ဘာ့ဖလားဝင်ခွင့်ကို ဗိုလ်လုပွဲလိုမျိုး မျက်နှာချင်းဆိုင်ဖြေရှင်းကြတော့မယ့် ပွဲစဉ် ၅ ပွဲ
Next Article ဒဏ်ရာရစာရင်းတွေ ဆက်တိုက် တိုးပွားလာနေတဲ့ လီဗာပူး